NAB ပြပွဲအတွင်းပျော်မွေ့ရန်စားသောက်ဆိုင်များ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » NAB ပြပွဲတွင်ပျော်မွေ့ရန်စားသောက်ဆိုင်များ
Las Vegas တွင်ရှူရှိုက်ရန်သင်စာသားအရအသက် ၂၁ နှစ်ရှိရမည်ဖြစ်သောကြောင့်အကောင်းဆုံးနေရာများမှာ ၂၁ ခု (အချို့ကို“ ဒေသခံများသာ” အစက်အပြောက်များ၊ NAB ပြရန် ရရှိနိုင်တဲ့အရသာအကောင်းဆုံးမြက်ပင်ကိုရှာဖွေရန်။ မင်းကိုသတိရပါ၊ လူတိုင်းကနေရာတိုင်းကိုနှစ်သက်ကြမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုတွေ့ပြီ။ ငါပြောနိုင်တာက ၂၀၂၀ လမ်းကိုရောက်နေတယ် NAB ပြရန်အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ကိုရပ်တန့်ပြီးမြည်းစမ်းပါ။ ဤတွင်သင့်ကိုပျော်ရွှင်စေရန်သေချာသည့်အရသာရှိသောရွေးချယ်မှုအချို့ဖြစ်သည်။
Tao စားသောက်ဆိုင် (3377 S ကို Las Vegas မှ Blvd#702-388-8338) website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
စဉ်အတွင်းနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း NAB ပြရန်ကျွန်ုပ်သည်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများ၊ မိသားစုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သားများအတွက် TAO's Restaurant တွင်ပွဲလေးတစ်ခုပြုလုပ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကငါဆာဗာကိုညစာတစ်ခုလုံးကိုသူ့လက်သို့ယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ မတူကွဲပြားသောအစားအစာများနှင့်အတူဤအရူးအမူးစွဲလမ်းမှုငါးခုရှိသောအစားအစာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ တကယ့်ပေါက်ကွဲသံပါတကား! ငါ Honey Ginger Glazed Salmon ကိုအကြံပေးနိုင်မလား။ Shiitake မှိုနှင့် Lotus Root ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်လည်းအကျိုးရှိသည်။ ဒီ ၆၀၀၀၀ စတုရန်းပေကျယ် ၀ န်းသော“ အာရှစီးတီး” တွင်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခု၊ စားသောက်ခန်းများ၊ စားသောက်ခန်းများ၊ တည်းခိုခန်းများနှင့်အလွန်အေးသောနိုက်ကလပ်နိုက်ကလပ်တစ်ခုရှိသည်။ - ဂတ်စ်ကြည့်ရှုရမည် !!!
Siam ၏ Lotus (953 အီးဆာဟာရရိပ်သာ Ste ။ A5 #702-735-3033) website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
ကျွန်မအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူကဒီမှာအကြိမ်ပေါင်းများစွာပါပြီ Facilis နည်းပညာ။ သူတို့ရဲ့မြောက်ပိုင်းထိုင်းရိုးရာအစားအစာလူသတ်သမားပါ! crispy ဘဲ ... နက်ရှိုင်း-ကြော်ပုစွန် ... အပြည့်အဝ menu ကိုသင်အံ့သြသွားလိမ့်မယ်မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းကျိန်းသေနီးပါးမဖြစ်နိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရာတွင်စေမည်! ဒါဟာ mom,-and pop စားသောက်ဆိုင်အဖြစ်ကိုချွတ်လာ - ဒါပေမယ့်အမြဲတမ်းပေါက်ကွဲမှုင်နှငျ့သငျတူစားပွဲ၌လူအတော်များများစီးနင်းနိုင်ပါတယ်။ ထိုအ oh - စပျစ်ရည်ရှိသည်! အစားအစာများနှင့်ဝိုင်၏ကွဲပြားခြားနားသောပေါင်းစပ်အားလုံးသည်ငါဒီတော့ဒီနေရာကိုမကြာခဏရောက်ခဲ့ဖူးအဘယ်ကြောင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုရှင်းပြပါ - နှစ်ကြိမ်အတိအကျတူညီ combo ကိုစားတော်မူပြီးမှမပါဘဲ!
Carbone အီတလီ စားသောက်ဆိုင် (၃၇၃၀ S Las Vegas Blvd. ) #877-230-2742) website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
အတွင်းမှာတည်ရှိပါတယ် Aria ဟိုတယ်နှင့်ကာစီနိုCarbone Italian Restaurant သည်အကောင်းဆုံးအီတလီအစားအစာများကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးသည်။ ဘားအပြည့်တစ်လုံးသည်အချိန်ကုန်ဆုံးသောအစားအစာများကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ဒီရိုးသားပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိသော်လည်းကြော့ရှင်းသည့်စားသောက်ဆိုင်ကိုထည့်ရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါအိမ်ခြံမြေသည်ကောင်းစွာရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပုဇွန် Fra Diavolo စံပြဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ငါမနည်းမျှော်လင့်ထား။
ချန်ဒူးမြည်းစမ်း (3950 Schiff ဒေါက်တာ #702-437-7888) website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
ချန်ဒူးမြည်းစမ်းစီချွမ်အစားအစာပေးထားပါတယ်။ ငါ့ကိုကိုစား: အဆိုပါအရသာပဲထွက်ခုန်ခြင်းနှင့်ပြောပုံရသည်! (အဘယ်သူမျှမမလမ်း) ။ ငါတရုတ်နိုင်ငံပြင်ပမှာရှိခဲ့ဖူးတဲ့အကောင်းဆုံးတရုတ်အစားအစာ။ ငါပေါက်ကွဲသံကြီးကြက်သား, ညီမရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုငံပြာရည်နှင့်အတူအန်စာတုံးယုန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါမော်စီတုန်း Chi ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ငါ့အဘို့နည်းနည်းစပ်ခဲ့ပါတယ်။ ရဲရင့်အရသာ & Friendly န်ထမ်းများ။
မစ္စတာ Chow (3570 S ကို Las Vegas မှ Blvd. #702-731-7888) website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
အတွင်းမှာတည်ရှိပါတယ် ကဲသာဘုရင်၏ဥစ္စာဖြစ်သည်မစ္စတာချောင်ကပေကျင်းတရုတ်ဟင်းချက်ပွဲမှာပါဝင်သည်။ ချစ်စရာကောင်းပြီးလှပပြီးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော Mr. Chow သည်စတိုင်ကိုဖြာထွက်စေသည်။ ရွေ့လျားနေသည့်အရောင်အလင်းရောင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်မျက်နှာကျက်မှရွေ့လျားထားသောရွေ့လျားနေသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်နောက်ထပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပေးသည်။ ဝန်ဆောင်မှုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရှိ၏ သို့သော်စားသောက်ဆိုင်သည်မိသားစုအရွယ်သို့မဟုတ်ပိုကြီးသောအုပ်စုများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။ လူပျိုညစာစားပွဲထွက်မတ်တပ်ရပ်။ လက်မှတ်ပန်းကန်၊ ပေကျင်းဘဲ၊ သူတို့ဟာသူတို့ကိုယ်ပိုင်ခေါက်ဆွဲကိုလက်နဲ့ဆွဲကိုင်တယ်။ ညစာစားရန်အလွန်ကောင်းသောနေရာဖြစ်သည် - သူငယ်ချင်းအချို့ယူလာပါ။
ဗီယက်ခေါက်ဆွဲဘား (5288 နွေဦးတောင်လမ်း။ #702-750-9898) website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
ဗီယက်ခေါက်ဆွဲဘားတစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ကျယ်ဝန်းဗီယက်နမ်စားသောက်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်ရိုးရာ Bahn Bao ပန်းကန်ပေါ်တွင်သူတို့ယူ (ကဘောလုံးကိုအသား, ကြက်သွန်, ကြက်ဥ, မှို, နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမျိုးမျိုးနှင့်အတူပေါင်း Bun shaped) သည် "ဘန် Bao ဘို Xao" ဟုအဆိုပါအသားနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အတွင်းပိုင်းနံရိုး-မျက်လုံးဖြစ်ကြပြီး ဆီပူနှင့်ကြော်သည်။ ဒါဟာ 8 နှစ်ကောင်ထက်လျော့နည်းကုန်ကျမယ့်အရသာentréeပဲ! သူတို့ရဲ့ခေါက်ဆွဲဟင်းချို (ဖိုး) အဖြစ်ကောင်းစွာအတော်လေးအရသာရှိတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အသားရွေးချယ်မှုအဖြစ် brisket, နံ, ဖက်တီးခြမ်း, tripe, ရွတ်သို့မဟုတ်ရှားပါးကင်ပူဇော်ကြ၏။ ငါသည်သူတို့၏ Soda Sua ဟော့ Ga (ဗီယက်နမ်ဥ Soda) ကြိုးစားရန်အာရုံကြောတက်အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်ငါ၏စွန့်စားပေမယ့်ဝန်ခံရမည်အနောက်တိုင်း palette ရေခဲ creamy / custardy အဖျော်ယမကာတစ်ခုထူးဆန်းလန်းဆန်းမျိုးနှင့်အတူခံရတယ်။ သူတို့ကတချို့သက်သတ်လွတ်ရွေးချယ်စရာနဲ့ရှည်ရှည် menu ကိုအဖြစ်အချို့သောဒဏ်ငွေကျယမကာတစ်ဦးရှေးခယျြမှုရှိသည်။
-Yui Edomae (3460 Arville စိန့် #702-202-2408) website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
ရှာတွေ့ဖို့အတွက်အလွယ်ကူဆုံး, မ-Yui Edomae အဓိကလမ်းပိတ်ထားကွာတွေထဲမှာအောင်းနေနိုင်ပါတယ်အသစ်တစ်ခုဆူရှီစားသောက်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ (- အသေးစိတ်ဖို့ဆိုလိုသည်မှာနွေးထွေးမှု, လေးစားမှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဂျပန်ဝန်ဆောင်မှု။ ) အားလုံးဆူရှီစားသောက်ဆိုင်နှင့်အတူအမျှ, သူတို့ငါးယောက်အခြေခံအရသာ၏ Umami (savory) တစျပိုငျးကိုအတွက်အထူးပြုဒါဟာ omotenashi ဝန်ဆောင်မှုပါရှိပါတယ်။ လည်းစုံလင်ခြင်းရှိ၏ရာ Aoyagi (လိမ္မော်ရောင် Clam), ငါ (ကျနော်မကြာခဏနည်းနည်းများလွန်းငန်ကိုရှာဖွေရာ, ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာပဲစုံလင်ခြင်းရှိ၏) ကို Ikura ခဲ့ - နူးညံ့ရုံညာဘက်ကိုက်နှင့်အတူချိုမြိန်လျက်, အချို့ uni (ပင်လယ် urchins) - က အလင်းချိုမြိန်ပြီး Wee နည်းနည်း briny ဖြစ်ခဲ့သည်။ သငျသညျလေထု, (တစ်ဦးမြို့တော်က F နှင့်အတူ) လတ်ဆတ်တဲ့အစားအသောက်, ကြီးစွာသောအရသာကြိုက်နှစ်သက်လျှင်ဤအထဲကစစ်ဆေး!
သိုးစုကို & ငှက် (380 W ကဆာဟာရရိပ်သာ # 626-616-6632) website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
သိုးစုကို & ငှက်ဖြစ်စေတစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်ကြက်သား-based အစားအစာများ၏3ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးပေါင်းနှင့်အတူ Hainanese ကြက်သားဆန်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ စျေးနှုန်းများအစာရှောင်ခြင်းအစာအာဟာရစားသောက်ဆိုင်နှင့်အတူတန်းတူအပေါ်ဖြစ်ကြသည်။ ကြက်သားအတောင် (ထိုင်း caramel-ကြက်သွန်ဖြူ) နှင့်အနည်းငယ်ကအခြားရွေးချယ်စရာမီနူးထဲကအပတ်လည်၌။ အထူးသဖြင့်စျေးနှုန်းအဘို့, အရသာ။ ကျွန်မအသံလွှင့်ကိုဖုံးလွှမ်းသည့်အခါဤအရဆုံးလမ်း-ရောင်းချသူအစားအစာကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်တဲ့ခံစားချက်ရှိသည်: ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်း ASIA မှ ...
FukuBurger (3439 S ကိုဂျုံးစ် Blvd. # 702-776-8928) website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
Fukuburger ဂျပန်အမေရိကန်ဘာဂါ features - All-အမေရိကန်အစားအစာအပေါ်တစ်ဦး "တိုကျို Twisted" ။ အဆိုပါစားသောက်ဆိုင်ဂတ်စ်န်းကျင်အမျိုးမျိုးသောဖြစ်ရပ်များနှင့်တည်နေရာများကိုသွားရောက်မယ့်စတိုးအသွင်အပြင်နှင့်အစားအစာထရပ်ကားနှစ်ဦးစလုံးရှိပါတယ်။ ငါသည်သူတို့၏ဘာဂါ၏စုံတွဲတစ်တွဲနမူနာကောကျပွီးနောကျထအာရှနွယ်နှစ်ခုလက်မအပ်ပေးတော်မူ၏။ ဘာဂါနှင့်အတူပျင်း? ရုံဥစ္စာများနှင့်နေ့စဉ်စားနဲ့ပါလိမ့်မယ် re-invigorate သငျ့ဆကျဆံရေးရန်နောက်ထပ်ယဉ်ကျေးမှု add!
Soho SushiBurrito (2600 W ကဆာဟာရ Ave no.115 #702-778-2525) website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
မက္ကဆီကန်နှင့်ဂျပန်အစားအစာ - Soho SushiBurrito Las Vegas မှာ, ကယ်လီဖိုးနီးယား, ကော်လိုရာဒိုနှင့် Utah ကြီးထွားလာခဲ့တာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနှစ်မျိုးတစ် flavorsome blending ပါရှိပါတယ်။ ၎င်း၏မက္ကစီကိုစီးတီးတိုကျိုအမြန်အစားအစာနှင့်တွေ့ဆုံတွေ့ဆုံ! စားဖိုမှူးဆရာယောဟနျ Chien Lee ကစားပွဲပေါ်မှာမှအချက်အပြုတ်အတှေ့အကွုံနှစ်ဆယ်နှစ်ကျော်ဆောင်ကြဉ်း, ဒါပေမယ့်သူလည်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တာဝန်တစ်ခုချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာထိုးတတ်၏ပါဘူးမသာ။ ကမ္ဘာဂြိုဟ်နှင့်သောလျှာသည်တစ်မွေ့လျော်ဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံရဲ့တစ်ဦးကထမင်းစားခန်းအတွေ့အကြုံကို! ကျွန်ုပ်တို့၏ Janet အနောက်ဒီကြိုးစားသင့်!
ဟောင်ကောင်Café (3325 Las Vegas မှ Blvd. အက်စ် #702-607-2220) website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
ဟောင်ကောင်Caféအဆိုပါလောင်းကစားရုံကြမ်းပြင်ပေါ် Palazzo Resort ဟိုတယ်မှာကြင်နာCafé၏ဤတစျခုတှငျအရှေ့နှင့်အနောက်တစ်မူထူးခြားတဲ့ blending ပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါမကာအိုပုံစံလှော်ဝက်သားဝမ်း, ဘုရင်ပင်လယ်စာဗီယက်နမ်ခေါက်ဆွဲဟင်းချို - ငါသည်သူတို့၏လက်မှတ်ဟင်းလျာများနှစ်ခုနမူနာ။ ငါမအစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်ပေါ့, ဒါကြောင့်ငါအစားအစာခဲ့ကြောင်းဖွင့်ပြောပါလိမ့်မယ် '' အလွန်ကောင်းသော။ ' အကြှနျုပျ၏စားပွဲထိုးလည်း ... အလွန်ကောင်းတဲ့, ခြွင်းချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Kame Omakase (7331 W ကရေကန် Mead Blvd. #702- 562-8668) website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
Kame တည်ဆဲ yummy ကင်ဆူရှီစားသောက်ဆိုင်တစ်ခု upscaling တိုးချဲ့ / extension တခုဖြစ်တယ်တဲ့ဆူရှီစားသောက်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ စားဖိုမှူးအဲရစ်ကင်မ်ကသူ့, ထူးခြားတဲ့လတ်ဆတ်နှင့်အံ့သြလောက်အောင်အရသာရှိတဲ့ပင်လယ်စာနှင့်အတူသမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးအရသာရှိတဲ့ခရီးစဉ်အပေါ်တစ်လျှောက်တွင်သင်သည်ကြာပါသည်။ ငါရှိခဲ့အရာအားလုံးအံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည် ... ကျွန်မအနည်းငယ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ dined နှင့်များစွာကိုဟင်းလျာများနမူနာ။ ငါကြိုးစားခဲ့သည့် Nigiri အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဗားရှင်းခြွင်းချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သင့်ရဲ့အာခေါင်သမုဒ်ဒရာကျေးဇူးမှတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်လျှင်သင်ရိုးရှင်းစွာဤနေရာတွင်စားရကြမည်!
Chow (1020 Fremont စိန့် #702-998-0574) website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
Chow မှာတောင်ပိုင်းဟင်းချက်အာရှအစားအစာနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဒါဟာသော်လည်း, အာရှ-fusion မဟုတ်ဘူး, ဒါပေမယ့်တန်းတူများ၏ပူးတွဲတည်ရှိ။ သူတို့ဟာအလွန်လက်ခံကြသည် - နေပါစေသင်မည်မျှကွဲပြားခြားနားသော; အရပျတခု Vibe ၏မျိုး '' လူတိုင်းအတွက်သင်၏အိမ်နီးချင်းရဲ့ '' မှန်းချက်ရဲ့။ ရှစ်အများဆုံးရက်ပွင့်လင်းမွန်းတည့်။ သူတို့ကပဲသင်တစ်ဦးအလုအယက်ရောက်နေကိစ္စတွင်အတွက် Takeout ပြတင်းပေါက်ကဆက်ပြောသည်။
ဂျေထို့ကြောင့်ရဲ့ (3565 S ကိုသက်တ Blvd. #702-269-5446) website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
ဂျေထို့ကြောင့်ရဲ့ Creole & Cajun ချက်ပြုတ်နီးပါးကျွန်မတစ်နည်းနည်းနဲ့ Louisiana ပို့ဆောင်ခဲ့ချင်ပါတယ်ယုံငါ့ကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကကျိန်းသေသူတို့ရဲ့ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောအပေါ်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏ "ဟုပန်းကန်ထဲမှာ Soul ။ " ဒီထို့ကြောင့်နှင့် Jambalaya အဘို့အသေခံရန်ရှိကြ၏။ ငါ chicory ကော်ဖီနှင့်စုံတွဲတစ်တွဲအချိုပွဲ beignets နဲ့ငါ့အတှေ့အကွုံအထဲကဝိုင်းပါတယ်။ ဤနေရာတွင်ကိုစား - တကယ်!
lo-lo ရဲ့ကြက်သား & Waffles (2040 N ကိုသက်တ Blvd. # 702-483-4311) website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
lo-lo ရဲ့ကြက်သား & Waffles ဂတ်စ်ကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးအကောင်းဆုံးကိုဝိညာဉျကိုအစားအစာပါရှိပါတယ်။ ချိုမြိန်လက်ဖက်ရည်နှင့် Kool-Aid ကို၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကိုလက်ပေါ်အမြဲဖြစ်ပါသည်နှင့် "ခရိုဝေ့ဖ်" ဒီမှာနေတဲ့ညစ်ပတ်ပေရေစကားလုံးစဉ်းစားသည်။ ဤသည်ကျယ်ဝန်းစားသောက်ဆိုင်ချားလ်စ် Barkley, Shaquille O'Neal နှင့်မိုဟာမက်အလီနှင့်အခြားသူများ၏အကြိုက်ခြင်းဖြင့်ထပ်အနုပညာရှင်ပွဲများအတွက်လူသိများသည်။ ၎င်းတို့၏လက်မှတ်ပန်းကန်အစဉ်အမြဲငါမြည်းစမ်းဖူးတဲ့အကောင်းဆုံးကြက်သားနှင့် waffles ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ကြက်သားသင်တစ်ဦးသည်အလွန်အမင်း '' စိတ်အားထက်သန် '' စားချင်သောသူ၏ပင့်လျှင်သင်သည်သင်၏လက်ချောင်း, လက်နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်သင့်ရဲ့တံတောင်ဆစ်ချိုးကိုလျက်ရန်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစေခြင်းငှါဤမျှကောင်းလှ၏။
Rivea Las Vegas မှ (3940 Las Vegas မှ Blvd အက်စ် # 702-632-9500) website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
Rivea Las Vegas မှတစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာ Panos တပ်ဆင်ထားသောမန္တလေးဂလားပင်လယ်အော်ကာစီနိုအတွက် Delano ဟိုတယ်ပေါ်ကနေဒီလှပတဲ့စားသောက်ဆိုင်အတွက်ပြင်သစ်နှင့်အီတလီ၏အရသာကိုအတူတူတတ်၏ Las Vegas မှ၏ ramic အမြင်။ အဆိုပါပန်းကန်အသေးဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့သည်လူတစ်ဦးနှုန်း2ပြားမှ3အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ငါသည်ငါ့အလည်အပတ်ခရီးကနေအများဆုံးအသစ်သောအရသာရဖို့3ကွဲပြားခြားနားသောပန်းကန်ကြိုးစားပြီးသွားခဲ့ပါသည်ပေမယ့်ရေဘဝဲသုပ်ငါအစားကြောင်း၏2ပြားရှိခြင်းတက်အဆုံးသတ်နိုင်အောင်ကောင်းသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအချိုပွဲများအတွက် zucotto (ကဘရန်ဒီ, ကိတ်မုန့်နှင့်ရေခဲမုန့်ပန်းကန်) နဲ့နောကျလိုကျ။ ခမ်းနား! သူတို့ဟာအဓိကအားဖြင့်ပြင်သစ်, အီတလီ, နှင့်အမေရိကန်ဝိုင် featuring တစ်တွင်ရှိသောစပျစ်ရည်ကိုစာရင်းရှိသည်။
Herringbone Las Vegas မှ (3730 Las Vegas မှ Blvd S ကို # 702-590-9898) website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
အဆိုပါ Herringbone သင်ယုံကြည်ဖို့အစာစားရမယ်အံ့သြဖွယ်ပင်လယ်စာပါရှိပါတယ်။ ဤသည်စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကယ်လီဖိုးနီးယားကမ်းရိုးတန်းအစားအစာအားဖြင့်မှုတ်သွင်းခဲ့ - က-Aria မှာရွှေ Lounge ဟာအစားထိုး, ဘရိုင်ယန် Malarkey (ကထိပ်တန်းစားဖိုမှူး alum) 's ကိုဒုတိယ Vegas မှာစားသောက်ဆိုင်ဖွင့်။ စင်ကြယ်သောပင်လယ်စာကယ်လီဖိုးနီးယားအတွက်၎င်း၏နှစ်ခုအစ်မတည်နေရာအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ဒုစရိုက်ဖြေအခမဲ့ "ငါး-သား-Field" ဆောင်ပုဒ်, အားဂုဏ်ပြုဒေသခံတာဝန်ရှိရင်းမြစ်ထားတဲ့အသားနှင့်အတူပေါင်းစပ်။ စားဖိုမှူး Malarkey ရဲ့ဒီဇိုင်းလေထုဆောင်တတ်၏နေချိန်မှာစားဖိုမှူး Geno Bernardo ကျွမ်းကျင်စွာ, သင်ဖို့အရသာတတ်၏။
ငါး (AKA- "ဒီရေခဲပြင်ဘား") အနုတ်
(မန္တလေးဂလားပင်လယ်အော်, 3930 Las Vegas မှ Blvd တောင်ပိုင်း #702-740-5800) website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
(ဘာသာစကား Venetian, 3377 Las Vegas မှ Blvd တောင်ပိုင်း #702-293-3388) website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
အနုတ်ငါးထူးခြားတဲ့ဘားအတွေ့အကြုံကိုပေးထားပါတယ်။ ဤသည်စာသားအစဉ်အမြဲငါမှဖူးအအေးဆုံး bar ကိုပါ! y က ... အပူချိန်တစ်ဦးအေးမြ -5 စင်တီဂရိတ်မှာထားရှိမည်ဖြစ်ပြီးရေခဲကိုဖန်ဆင်းနိုင်သမျှကိုရေခဲ -your ထိုင်ခုံ, ထိုမျက်မှန်, ဘား၏ဖန်ဆင်းထားသည် ou ပုံရပါတယ်။ သငျသညျဝင်အဖြစ်တစ်ဦးက parka နှင့်လက်အိတ်တစ်ဦးချင်းစီဧည့်သည်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ (- လိပ်စာစာရင်း - နှင့် The Monte Carlo မှာအခြားအဆိုပါနောက်ဆုံးပေါ်မန္တလေးဂလားပင်လယ်အော်မှာ), နယူးယောက်, Orlando တွင်, နှင့်ကေမန်ကျွန်းများဂတ်စ်: သူတို့ကယခု4သောနေရာများအတွက်နေရာများရှိသည်။ တိုင်းအမျိုးမျိုးကြွယ်ဝ၏ရေခဲပြင်ပန်းပု! ပုဂ္ဂလိကဖြစ်ရပ်များဟာသူတို့ရဲ့ရေခဲအနုပညာရှင်များတဦးတည်းရှိသည်ဖို့ထို option နှင့်အတူစီစဉ်ထားနိုင်ပါတယ်သင်အထူးအနည်းငယ်တစ်ခုခုထွင်း - တစ်ပန်းပုတစ်ခုတည်ဆောက်ပုံ, ကုမ္ပဏီလိုဂို - ဘာပဲ။ ဒါဟာတင်ဆက်မှုပေးဖို့ရန်အလွန်အေးမြသောနေရာတွင်ဖွင့် ...
ရုံရိုးရှင်းစွာဤစာရင်းတွင်ချွတ် left မရနိုင်သည်ကိုသုံးသည်အခြားနေရာများကိုအပိုဆုပေး Vegas မှာပြုလုပ်ထားခဲ့ပါ! အဲဒီမှာထည့်သွင်းခံရဖို့အလုံအလောက်ထိုက်သောဖြစ်ဟုဆိုနိုငျပိုဤမျှလောက်များစွာသောဖြစ်ကြပေမယ့်ဒီကအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့ဆုကြေးငွေများမှာ (ကျနော့်အမြင်ထဲမှာ!):
Taco အယ်လ် Gordo (1724 အီး Charleston Blvd. #702-251-8226) website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
တစ်တီယူအာနာလှည့်ကွက်နှင့်အတူမက္ကဆီကန်အစားအစာ, က (ငါသိပါတယ့်အဖြစ်ငါချွတ်ပေါ်တွင်တဦးတည်းကို ရွေးချယ်. !) နှစ်ခုကယ်လီဖိုးနီးယားသုံးယောက် Las Vegas မှာတည်နေရာရှိပါတယ်ငါဒီမှာ Azteca ကို Taco နှင့် fries ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ fries fries တစ်အိပ်ရာပေါ်ကနေသူတို့ရဲ့အရသာရှိတဲ့အသားတစ်ဦး၏သင့်ရွေးချယ်မှုပါရှိပါတယ်။ အရာအားလုံးလတ်ဆတ်နှင့်အရသာနှင့်အတူစိမ်းဖြင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါတာအစဉ်အမြဲငါကိုစားဖူးတဲ့အကောင်းဆုံးရှားစောင်းပင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကငါးအထူးဟင်းလျာများနှင့်အတူ Taco ၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံပါရှိပါတယ်။
Rick ရဲ့ Rollin '' မီးခိုး BBQ & ဇ (725 Las Vegas မှ Blvd S ကို Ste 110 #702-462-9880) website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
Rick ရဲ့ Rollin '' မီးခိုး BBQ & သက်သေမပေါ်တဲ့ BBQ ပူးတွဲခြင်းနှင့်သက်သေမပေါ်ဖြစ်သင့်သောအရာကို၏ပြီးပြည့်စုံသောသာဓကဖြစ်ပါသည်။ Plus အား, သင်သမိုင်း Channel ကိုရဲ့အပေါင်ကြယ်ကြယ်အချို့သို့ဝင်တိုးလိမ့်မယ်သောအခွင့်အလမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်! စီးရီးအတွက် featured အဆိုပါရွှေ & ငွေအပေါင်ဆိုင်တစ်ခုဖွင့်တဲ့ Wee-bit နဲ့တောင်ဘက်ကဒီသက်သေမပေါ်သည်။ ဘား 16 ကိုထိပုတ်ပါအပေါ်ဘီယာဒေသခံစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်အဖြစ်တောင်ပိုင်းကော့တေးတစ်အရသာရှိတဲ့ရောနှောပါရှိပါတယ်။ နံရိုးစမ်းကြည့်ပါ! သူတို့ကရိုးရိုးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပါပဲ! အဆိုပါ BBQ ဆော့စ်ကဲ့သို့ကောင်းသောသို့မဟုတ်အိမ်လုပ်ဝက်အူချောင်းရဲ့အကောင်းဆုံးထက်ပိုကောင်းပါ! ကိုယ့်ကိုသူတို့ကယူဂိုဆလားဗီးယားနှင့်လည်းရောင်းလိုရှိ၏။ အံ့သြဖွယ် - Rick ရဲ့ Rollin '' မီးခိုး BBQ အစဉ်အမြဲငါမှဖြစ်ဖူးတဲ့အကောင်းဆုံး BBQ ပူးတွဲပါ!
အလှအပ Essex (3708 S ကို Las Vegas မှ Blvd, #702-737-0707) website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
ရှေ့တွင်ရှိသောအပေါင်ဆိုင်ကိုမမှားပါစေနှင့်။ ဒါကတကယ့်ကိုအေးမြခေတ်သစ် Speakeasy မြို့လယ်မှာရှိတဲ့နာမည်ကြီးဟိုတယ်မှာတည်ရှိပါတယ်။ သတိပြုပါ - ဤအရာသည်သင်၏အဘိုး၏မိန့်ခွန်းမဟုတ်ပါ။ Killer သည်သောက်သော်လည်းကောင်းသည့်အစားအစာပင်။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ, ငါအကြံပြုပါသည် 38 အောင်စ။ 30-Day ကိုအပူပိုင်း-ဘိုးဘွားရိပ်သာ Tomahawk Ribeye ကင်, အလှအပ Essex လက်မှတ်ဝက်အူချောင်းနှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင် - အနက်ရောင် truffles hollandaise သို့မဟုတ်လှော်ကြက်သွန်ဖြူ & ဘေကွန်ဖြစ်စေ ... နှစ်ဦးစလုံးအထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောဖြစ်ကြပြီးနှစ်ဦးစလုံးသူတော်ကောင်းတရားများမှာ! သူတို့နေ့ရက်ကာလ၌ဆိုသညျကားဖို့အသုံးပြုအဖြစ် - ကပျား-ဒူးထောင်! မီနူးကိုထုတ်စစ်ဆေးပါ.
Las Vegas တွင်အကောင်းဆုံးသောနေရာများရရှိနိုင်ရန်ဤနေရာများကိုတတ်နိုင်သမျှထောက်ပံ့ပေးရန်သေချာပါစေ။ NAB ပြရန် သင်တတ်နိုင်သမျှတွေ့ကြုံခံစားပါ။ ၂၀၂၀ မှာမင်းကိုတွေ့ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် NAB ပြရန်!
NAB ပြပွဲတွင်ပျော်မွေ့ရန်စားသောက်ဆိုင်များ - ဇန်နဝါရီလ 7, 2020
Creative Christmas 12 ၏ 2019 နေ့ရက်များ - ဒီဇင်ဘာလတွင် 14, 2019
30,000 ခြေတက် - ငါငါ့လမ်းအပေါ်ပေါ့ #NABShow! @NABShow - ဧပြီလ 1, 2019
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ 2020 NAB ပြရန် ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း Las Vegas တွင်အေးဆေးစားသောက်ဆိုင်များ Las Vegas မှအစားအစာ Las Vegas မှစာဆိုင်များ NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB16 nabshow Las Vegas ရှိစားသောက်ဆိုင်များ	2020-01-07
ယခင်: Channel-In-a-Box TV တီဗီတံဆိပ်နှင့် Playout အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ဝယ်လိုအားဖြင့် PlayBox Neo သည် ၂၀၁၉ ကိုအားသစ်လောင်းပေးခဲ့သည်
နောက်တစ်ခု: ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအင်ဂျင်နီယာ Technician အ
၂၀၂၀ NAB ပြပွဲတွင် NAB Crystal Radio ဆုပေးပွဲ